Torolàlana momba ny vokatra - Zhejiang Leihao Electric Co., Ltd.
andian-dahatsoratra Module fiarovana ny tselatra
Ampiasaina amin'ny fiarovana ny firongatry ny faritra elektrika, fitaovana famatsiana herinaratra ary seranana herinaratra amin'ny fitaovana elektronika hafa; manafoana ny overvoltage mandalo, mamoaka ny courant, ary mametraka rafitra equipotential. (Fitaovana fiarovana amin'ny tselatra ambaratonga 1. Fitaovana fiarovana amin'ny tselatra ambaratonga faha-2. Fitaovana fiarovana amin'ny tselatra ambaratonga faha-3.)
Fitaovana fiarovana ny tselatra famantarana
Ny fitaovana fiarovana amin'ny tselatra famantarana dia mifototra amin'ny toetran'ny rafitra famantarana, manana tombony amin'ny fahaverezan'ny fampidirana kely, ny hafainganam-pandehan'ny valin-kafatra, ny fametahana marina, ny fivoahana ambany sisa tavela, sns., ary ny fampisehoana fampitana ambony. (Fitaovana fiarovana amin'ny tselatra roa ao anatin'ny iray. Fitaovana fiarovana amin'ny tselatra famantarana. Fitaovana fiarovana amin'ny tselatra famantarana. Fitaovana fiarovana amin'ny tselatra famantarana audio. Fitaovana fiarovana amin'ny tselatra famantarana ny Antenna).
andian-dahatsoratra boaty fiarovana tselatra
Namboarina mifanaraka amin'ny fepetra fiarovana amin'ny tselatra ao amin'ny boaty fampitoviana multimedia an-tokantrano maoderina, dia afaka miaro ny fitaovana fifandraisana anatiny sy ny fitaovana multimedia amin'ny fahasimbana ateraky ny tselatra.
Disconnector ivelany manokana (SSD/SCB) ho an'ny mpiaro ny fihoaram-pefy, manana fahamarinan-toerana tsara sy azo itokisana. (Mpiaro ny backup)
Zava-dehibe ny fiantohana ny vokatra
Rehefa rafitra IT (miaraka amin'ny tsipika N):
Ny tsipika N sy PE an'ny rafitra dia mitambatra ho tsipika PEN avy amin'ny lafiny ambany-volte amin'ny mpanova. Amin'ity toerana ity, ny mpiaro firongatry (3P) ihany no tsy maintsy apetraka eo anelanelan'ny tsipika sy ny tsipika PEN. Rehefa tafiditra ao amin'ny boaty fizarana lehibe amin'ny tranobe, ny tsipika PEN dia mizara ho andalana N ^ PE tsipika sy wiring tsy miankina. Ny tsipika PEN dia mifamatotra amin'ny busbar equipotential equipotential amin'ny tranobe mba hifandraisana amin'ny tany.
Ny tsipika N sy ny tsipika PE an'ny rafitra dia mifandray amin'ny faran'ny fivoahana amin'ny sisin'ny mpanova ary mifandray amin'ny tany. Alohan'ny hidirana ao amin'ny boaty fizarana ankapobeny amin'ny tranobe, ny tsipika N sy ny tsipika PE dia mifamatotra tsy miankina, ary ny tsipika sy ny tsipika PE dia tsy maintsy ampifandraisina Mametraka mpiaro ny fiakarana.
Ny tsipika N amin'ity rafitra ity dia miorina amin'ny teboka tsy miandany amin'ny mpanova, ary ny tsipika N sy ny tsipika PE dia misaraka tanteraka. Noho izany dia ilaina ny mametraka mpiaro ny fihoaram-pefy eo anelanelan'ny tsipika sy ny tsipika N, ary ny mpiaro ny fisondrotan'ny switch dia matetika napetraka eo anelanelan'ny tsipika N sy ny tsipika PE.
Ny teboka tsy miandany amin'ny transformer amin'ity rafitra ity dia tsy miorina, ary misy tariby N ao amin'ny tsipika.